Miditra madio, mivoaka madio ! | NewsMada
Miditra madio, mivoaka madio !
Fanovana, fanovana, fanovana… Ao ireo miala fa tsy maintsy misy kosa ny mandimby azy ireny. Tahaka izany hatrany. Tsy maintsy manao fanambaram-panana any amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) ireo mpitondra sy ny mpitantana sampandraharaha « ambony », rehefa mby eo amin’ny toerana misy azy. Fantatra amin’io fotoana io ny fari-pananan’ireny olom-boafidy na olom-boatendry « ambony » ireny.
… Saingy ahoana kosa rehefa miala teo amin’io toerana nisy azy io izy ireny ? Mbola takina aminy ve ny fanambaram-pananana ? Tsy misy antony hakana any am-boalohany ny mombamomba ny fananan’izy ireny mantsy raha tsy fantarina indray izany rehefa miala teo amin’ny toerany. Sa ve atao toy ny fahita any amin’ny firenena sasany ? Mba te hiseho eo imason’izao tontolo izao fa tany tan-dalana, mody ampandalovina fanadihadiana momba ny fananany lazaina fa tsy mazava ireo mpitondra niala na nalana tamin’ny toerany ?
… Tsy tokony ho tafaroboka ao anatina sarimihetsika efa lany andro tahaka izany i Madagasikara. Mila olona madio eo am-pidirana, madio eo am-pivoahana ny Malagasy. Raha tsy feno io fepetra io, ataovy ny fanadihadiana. Hiharihary toy ny tafika andrefan-tanàna izay nambotry firenena sy nampahory vahoaka tamin’ny alalan’ny fangoronan-karena tsy an-drariny… Mendrika ny handray ny valin’asany !
Ho zary nofy ihany anefa izany raha mbola tsy ny Malagasy no mitondra ny tanindrazany. Raha mbola tsy manaiky sy resy lahatra ny Malagasy fa foin-Janahary ho azy ity Nosy ity sy ny momba azy rehetra.
Mitaky fanabeazana mifanandrify sy mifanentana aminy ny Malagasy. Miainga avy any amin’ny fokonolona ny fampandrosoana. Vahaolana haingana sy mahomby ireo. Ny ivelan’izay, fampandriana andrisa sy fiheverana ny Malagasy ho bado sy azo atao amin’izay tiana hanaovana azy !